इनाम पुरस्कार समाचार स्प्रिंग नम्बर6- इनाम पुरस्कार
रिवार्डिङ समाचारको वसन्त संख्या6संस्करणमा स्वागत छ। हामीसँग धेरै कथाहरू र समाचारहरू छन्। हाम्रो नियमित ट्विटर फिडको साथ र घरको पृष्ठमा साप्ताहिक ब्लगहरू सम्मको साथ राख्नुहोस्।
यसको चरम चेरी खिलौना को यो चित्र वाशिंगटन डीसी मा लिया गएको थियो पछि हामी ग्लोबल शिखर सम्मेलन पछि हामीले अप्रिल को शुरुआती मा भाग लिया। आश्चर्यजनक कुरा, हामी केहि दिन अघि एडिनबर्गमा मात्र चोटीको फूल थियो।
सबै प्रतिक्रिया मैरी शर्पमा स्वागत छ mary@rewardfoundation.org.
सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन
डाक्टरहरूले पुष्टि गरेका छन् कि हामी शंकास्पद छौं
क्याम्ब्रिज कल गर्दै!
व्यवहार लतहरूमा 5th अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
संक्षिप्त पोर्नोग्राफी Screener
गठबन्धनमा यौन अन्वेषण शिखर अन्त गर्ने, वाशिंगटन डीसी
पोर्न चेतावनी - एक निजी "चलचित्र समारोह"
खैरो कक्ष र जेल कक्ष
फेसबुक र यूट्यूब
सेक्स लत-बनाम-पोर्न लत, जस्तै बीबीसी द्वारा कवर
यूके युग सत्यापन
एक Sad Farewell
तपाईले कुनै पनि संदेहमा धेरै संस्थाहरूको नोटहरू प्राप्त गर्नुहुने छ जुन तपाइँसँग सम्बन्धित डाटाबेसमा अप्ट इन गर्न अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ। खैर, यदि तपाईं रिवार्ड फाउन्डेशनबाट सुन्नु चाहानुहुन्छ भने तपाईले अर्को अनुरोधमा हामीलाई अनुरोध गर्नुहुने अनुरोधलाई प्रतिक्रिया दिन आवश्यक छ। हामी आशा गर्यौं!
हामी हाम्रो शृंखलाको पहिलो श्रृंखला चार रोयल कलेज जनरल जनरल प्रिएशनर्स-मान्यता प्राप्त, यो हप्ता एडिनबर्गमा इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको प्रभावमा एक-दिन कार्यशालाहरू एडिनबर्गमा। निम्न तीन मा हुनेछ लण्डन, मैनचेस्टर र बर्मिंघम अर्को केहि दिनमा। अहिलेसम्म, जीपीहरू सहभागी छन् भन्ने कुरामा हामीले पुष्टि गरेका छौँ कि उनीहरूले यौन दुर्व्यवहारहरू जस्तै 'विलम्बित विलक्षण' (प्रायः पूर्ण अस्तित्वको पछाडि प्रायः), एर्गोरसमिया (असक्षमता) जस्ता व्यक्तिहरूको संख्यामा ठूलो वृद्धि देखेको छ। संक्रामक गर्न) र अस्तित्वको रोग नै।
यो बितेका केही वर्षहरूमा मात्र भयो र स्मार्टफोन्स र ट्याबलेटमा निःशुल्क, कट्टर अश्लीलको व्यापक उपलब्धतासँग मेल खान्छ। त्यहाँ पनि अन्य योगदान कारक हुन सक्छ, तर मुख्य अपराधीको लागि हाम्रो पैसा नि: शुल्क स्ट्रीमिंग इन्टरनेट पोर्नको प्रभावमा छ।
चिकित्सकहरु लाई पनि सजग हो कि वियाग्रा र त्यस्ता परिशुद्धता वृद्धि दबाइहरु, धेरै समस्याहरु मा यस समस्या को कम गर्न को लागि राम्रो तरिकाले काम गरिरहेको छैन। उनीहरूले काम नगरेको कारण यो समस्या "बेल्टको तल होइन" हो, यानी पुरुष अंगहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंगमा रक्त प्रवाह हुन्छ, तर बरु "मस्तिष्कमा" मस्तिष्कबाट तंत्रिका सङ्केतको विच्छेदको बारेमा हो। यदि तपाईं गैरी विल्सनको हास्यास्पद र सूचनात्मक TEDx कुराकानी "द ग्रेट पोर्न प्रयोग" देख्न सक्नुहुन्न भने, यो हेर्नुहोस् यहाँ.
हेल्थकेयर चिकित्सकहरूले प्रायः बढ्दो अनुसन्धानबाट के सिकाउँछन्, उनीहरूको अचम्ममा, यो हो पोर्न-प्रेरित erectile dysfunction 'एक चीज' हो, र धेरै पुरानो पुरुषहरु संग सम्बंधित अक्षीय डाइमिशन समस्याहरु देखि अलग। यो लेख अंतर बताउँछ। यहाँ पनि एक छ प्रस्तुति पृष्ठभूमिमा ED लाई धेरै वैज्ञानिक सहयोगको साथ।
कृपया यदि तपाइँ छोटो सूचनामा उपलब्ध हुनुहुन्छ वा तपाईका साथीहरूलाई थाहा छ भने हाम्रो बाँकी कार्यशालाहरूमा साइन अप गर्नुहोस्। हामी 2018 विगतमा चाँडै भविष्यको मिति विज्ञापन गर्नेछौं।
हाम्रो सीईओ मार्नी शर्प को लुसी कैवेंश कलेज, क्याम्ब्रिज, जैकी अशले को अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित गरिएको छ (यो पनि संरक्षक स्तम्भकार र राजनैतिक प्रसारक एन्ड्रयू मरेन्द्रको पत्नी) बिहीबार7मा किशोरों मस्तिष्कमा इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको प्रभावबारे बोल्नth जुन 2018। हेर्नुहोस् यहाँ थप जानकारीको लागि। यो नि: शुल्क घटना हो। यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस्।
5th व्यवहार लतहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
रिवार्ड फाउन्डेशन प्रतिष्ठित मा आफ्नो पहिलो भाषण बनाउन प्रसन्न थियो ICBA सम्मेलन कोलोनमा भएको ठाउँ, जर्मनी 23-25 अप्रिल। आईसीबीएले दुनियाभरका शीर्ष न्यूरोओअनिस्टिस्ट र मनोवैज्ञानिकहरुलाई व्यवहारिक लतमा हालको अनुसन्धानको प्रदर्शन गर्न लायक गर्दछ। TED घटनाहरूले तपाईंको हृदय खाए! यो कहाँ वास्तविक वास्तविक किनारा फेला परेन। प्रोफेसर स्टर्कले पोर्नोग्राफी प्रयोगको प्रभावमा वैज्ञानिक अनुसन्धानको समग्र क्षेत्र संक्षेपमा मुख्य कुराकानी दिए। यो एक साँचो मास्टरक्लस थियो।
डार्रील मेडले आज समाजमा इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको प्रभावको सार्वजनिक संचारमा दानको काम प्रस्तुत गर्यो। उनले स्कूलमा हाम्रा प्रमाण-आधारित सबक योजनाहरू, स्वास्थ्य सेवाका पेशेवरहरूको लागि कार्यशालाहरू, वकीलहरू, सार्वजनिक सेवकहरू र शिक्षकहरू र वैज्ञानिकहरूको काम गर्नेहरूलाई उनीहरूलाई चाहिने सुलभ बनाउनको लागी कुरा गरे। यो इजरायलमा गत वर्षको आईसीएबी सम्मेलनमा इन्टरनेट पोर्नोग्राफीमा वैज्ञानिक पेपरहरूको समीक्षा समावेश गरिएको थियो।
यदि तपाईं यस सहकर्मी-समीक्षा पेपरमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई एक लिङ्क दिन सक्छौं जसले तपाईंलाई प्रकाशकबाट पेपर डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। प्रकाशन सम्झौताले मात्र सीमित संख्यामा निःशुल्क प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराउन अनुमति दिन्छ। हामी जेएनएमएमएक्स कन्फिगरेसनका कागजातहरू पछि पत्रिकामा आधारित नयाँ समीक्षा प्रकाशित गर्न अपेक्षा गर्दछौं यौन लत र अनिवार्यता.
यदि तपाइँ एक चिकित्सक हुनुहुन्छ भने कसरी समस्याग्रस्त अश्लील प्रयोग पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चासो राख्नु हुन्छ, तपाईले बिस्त पोर्नोग्राफी स्क्यानर भनिने नयाँ उपकरणमा मूल्य पाउन सक्नुहुनेछ। यो वर्षको आईसीएबी सम्मेलनमा उल्लेखित खजाने मध्ये एक थियो। गत वर्षको लागि हामीले लामो समयको सिफारिस गरिसकेको छौँ, अधिक विस्तृत स्क्रेनेजरले भनिन्छ समस्याग्रस्त पोर्नोग्राफी स्केल प्रयोग गर्नुहोस् 18 प्रश्नहरूको साथ, तर यो नयाँ उपकरणमा केवल पाँच छ। The संक्षिप्त पोर्नोग्राफी Screener सामान्य चिकित्सकहरूलाई एक उपकरण जो NHS नियुक्ति सामान्य भित्र प्रयोगको लागि द्रुत रूपमा छिटोमा एक महत्त्वपूर्ण सफलता जस्तो देखिन्छ।
हामी यस अचम्ममा भाग लिन सक्षम भयौं ग्लोबल शिखर सम्मेलन विश्वभरका 600 कार्यकर्ताहरू र अकादमिक संस्थाहरूबाट शिक्षाविद्का साथ। कुराकानीहरू फेसबुकमा लाइभ स्ट्रिम गरिएको थियो र अझै अनलाइन उपलब्ध छन्। तपाईं प्रोफेशनर गेल डाइन्स, संस्कृति फ्रिजको संस्थापक * सुन्न सक्नुहुन्छ, फरक व्याख्या गर्नुहोस्कट्टरपन्थी feminism र उदारवादी feminism को बीच, पूर्व विरोधी अश्लील, पछि प्रो समर्थक।
तपाईं एक आमाको हृदय भाषणको कथा सुन्न सक्नुहुन्छ जसको 15-वर्षीय छोरी एक अन्य 15 वर्षकी केटी द्वारा गर्भ गरिएको थियो, एक दिन को ब्याकप्याप्समा 21 वर्षको उमेरमा अपहरण गरी यौन सम्बन्धको साइट कामदारहरूमध्ये धेरैलाई दूषित गरिएको थियो। उनको कैदीहरूले आफ्नी आमालाई सम्पर्क गरिसकेका थिए र उनीहरूको मानेका थिए भनेर धेरै मानिसहरु द्वारा बलात्कार भएको थियो। परिवार एक छोरी संग एक टुक्रा उठाएको थियो जुन पहिले कुनै पनि प्रकारको समस्यामा रहेको थिएन र राम्रो विद्यालय विद्यार्थी भएको थिएन। त्यो रूपमा चित्रित जेन डो (संख्या। 3) मानव हस्तक्षेप को बारे मा एक वृत्तचित्र फिलिम।
हामी पनि व्यस्त थिए। हामीले पोर्नोग्राफी र सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतिमा एक विश्वको वरिपरिका आसपासका 50 सहभागीहरूसँग विभिन्न दृष्टिकोणहरू हेर्न र राम्रो व्यवहारमा विचार साझा गर्न सहयोग गर्यौं। हामीले केही उपयोगी जानकारी भेला गरेका छौं जुन हामीले एनसीओएसई संगठनको लागि एक रिपोर्टमा राखेका छौं। हामीले एक स्वास्थ्य दिएर स्वास्थ्य चेतावनीको एक उपन्यास दृष्टिकोण देखाउने कागज पनि दिए जुन एक व्यक्ति अश्लील हेर्नु अघि, सिगरेट प्याकेटहरूमा चेतावनी जस्तै। यसमा थप अर्को वस्तुमा तल।
एडिनबर्गको कलेज ऑफ आर्ट विश्वविद्यालयका छात्रहरूले इनाम पुरस्कारको लागि अप्रिलमा राखे। आज हामी समाजलाई मारिएका चुनौतीहरूको बारेमा जागरूकता बढाउन हाम्रो प्रयासको भागको रूपमा पोर्नोग्राफीको व्यापक प्रयोगको साथ, हामी सिगरेट प्याकेटहरूमा स्वास्थ्य चेतावनीको जस्तै अश्लील सत्रहरूको सुरुवातमा स्वास्थ्य चेतावनी राख्ने विचारको साथ आएको छ। यस विचारलाई प्रगति गर्न हामी एडिनबर्गको कलात्मक कला विश्वविद्यालयमा ग्राफिक डिजाइनर विद्यार्थीहरूसँग भेट्न मौका पाएका थियौं। तिनीहरूको मिशनले 20 लाई 30 दोस्रो फिल्ममा सिर्जना गर्न थालेको थियो जुन यस तरिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो एक प्रोजेक्ट थियो जुन उनीहरूको पाठ्यक्रमको कामको भाग थियो र तिनीहरू यसलाई उत्साहसाथ गए।
परिणामहरू सास लिइरहेका थिए। यो अत्यधिक सम्मानित विद्यार्थीहरूको 12 प्रस्तुतीकरणका साथ हाम्रो धेरै निजी फिल्म उत्सवमा बस्न निमन्त्रणा गर्न मनाइएको थियो। विविधता र प्रभाव ठूलो थियो। त्यसपछि हामी तिनीहरूलाई6वटा वाशिंगटनमा यौन शोषणमा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनमा 200 प्रतिनिधियों भन्दा अधिक छ भनेर तिनीहरूलाई प्रसन्न तुल्याएका थिए जहाँ उनीहरूले गम्भीर रूपमा प्राप्त गरेका थिए। केही नीति निर्माताहरू र राजनीतिज्ञहरू यस काममा पछ्याउन चाहन्थे।
मरियम शार्प फर्किए नोलान लाइभ7मार्च मा 2018 मा बीबीसी उत्तरी आयरल्याण्ड मा। लिङ्कले तपाईंलाई यो यस भागको पूर्ण भिडियोमा लिनेछ। मार्नीले एक अभिनेता र एक उत्तेजना पोष्ट एड्स संग बच्चाहरु को मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य मा होस्ट स्टीफन नोलन संग पोर्नोग्राफी को प्रभाव मा बहस गरे।
अघिल्लो न्यूजलेटरमा उल्लेख गरेको रूपमा, गत वर्ष हाम्रो सीईओ मरी शर्प ग्लासगोको स्ट्रथसेली विश्वविद्यालयमा आधारित सीवाईसीजेका सहयोगीको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यो विषय मा आफ्नो वार्षिक सम्मेलनमा "किशोरों को ब्रेन मा इन्टरनेट पोर्नोग्राफी को प्रभाव" मा उनको जेठी भाषण को पेशकश को प्रसन्न थियो खैरो कक्ष र जेल कक्ष। यो त्यही दिन नै नैन लाइभ टिभि कार्यक्रममा बेलफास्टमा भएको थियो।
सबै प्रस्तुतिहरूको स्लाइडहरू उपलब्ध छन् यहाँ र मरियमको कुराकानी P.85-end मा सुरु हुन्छ। यो भेट्न को लागी एक महान अवसर थियो र अन्य शोधकर्ताहरु र चिकित्सकहरु संग विचार साझा गर्न आज जो स्कटल्याण्ड मा आज आपराधिक न्याय को अध्ययन संग गहिरो शामिल छ।
हामी हाम्रो नयाँ फेसबुक पेजको बारेमा घोषणा गर्दछौं जुन हामीले सिकाउने कार्यशालाहरूमा ध्यान दिनेछौं र हामीले अन्य सुविधाहरू केन्द्रित गर्दछौं। हामीलाई लिंक गर्न नि: शुल्क लाग्छ यहाँ.
तपाईं अहिले हाम्रो नयाँमा भएका भिडियोहरूको सानो छनोटमा रुचि हुन सक्नुहुनेछ YouTube च्यानल। आउनको लागि त्यहाँ धेरै भिडियोहरू छन् जुन अहिले हामी धेरै विशेषज्ञहरू संग विश्व भरिका रेकर्डिङ सम्पादन गर्दै सम्पादन गर्ने योजना छ।
अन्तिम हप्ता सम्बन्धहरू दान सम्बन्ध राख्नुहोस् एनआरएस को लागि बाहिर जाने को लागि "सेक्स लत" को लागि मदद मांगने को बोझ संग मदद को लागि अधिक गर्न को लागि। यो बीबीसी र अन्य मिडिया आउटलेटहरू द्वारा 'सेक्स लत' मा फोकस गरिएको समाचार हेर्न को लागी निराशाजनक थियो, यो बाध्यकारी अश्लील हेरविचार र हस्तमैथुन भन्दा अन्य व्यक्तिहरूको लागि बाध्यकारी व्यवहार हो। कट्टर पोर्नको लागि सजिलो पहुँच सम्म निःशुल्क उपलब्ध भयो र ब्रान्डब्यान्ड केही 10 वर्ष पहिले नै उपलब्ध रूपमा उपलब्ध भयो, समस्याग्रस्त अश्लील प्रयोग कम से कम थियो र यौन थेरेपी प्रशिक्षणमा यौन सम्बन्धको रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो।
तथापि सेक्स लत र अश्लील लत संयोजन आज अब उपयुक्त छैन, कम से कम आज पनि धेरै युवा अश्लील पोष्टहरू कुमारीहरू छन्। यो पनि एक भ्रम हो कि व्यापक रूपमा यौन विज्ञापतिहरु द्वारा शोषण गरिन्छ। उनीहरूले माउन्ट इङ्गल्याण्डलाई बेवास्ता गर्न छनौट गर्छन् र राजनीतिक कारणहरूका लागि जोर राख्छन् कि सेक्स वा अश्लील लत जस्ता कुनै पनि चीज छैन। बरु तिनीहरू हर्वे वाइस्टाइनन वा टाइगर वुड्स जस्ता हलिउडहरूमा छलफलको मिडिया फोकसलाई परिवर्तन गर्छन् भनेर भनिन्छ कि यो खराब व्यवहारको लागि मात्र एक अमीर मानिसको बहाना छ। तर आईसीएबी सम्मेलनमा कम्तिमा3अनुसन्धान कागजातबाट स्पष्ट थियो कि बाध्यकारी यौन व्यवहार विकार भएका व्यक्तिहरूको प्रायः अधिकांश व्यक्ति यौन कामदारहरू वा मनपर्ने भन्दा सट्टा अश्लीलको बाध्यकारी प्रयोगसँग समस्या छ।
A सहमति प्रमुख विद्वानहरु मा Lancet '' को नयाँ नैदानिक ​​कोटी समर्थन गर्नुहोस्, जसमा दुबै अश्‍लील लत र यौन लत समावेश छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनको चाँडै प्रकाशित हुने रोगको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण 11th संस्करणमा समावेशको लागि। जब यो प्रकाशित हुन्छ, यो जानाजानी कन्फ्युजनको समाधान हुँदैन।
यो कारण छ कि हातमा एक स्मार्टफोन मार्फत अत्यन्त उत्तेजना अश्लीलको लागि तयार पहुँच वास्तविक जीवनको साझेदारहरू खोज्न र अझ सेक्सको लागि संलग्न गर्न प्रयास गर्नु भन्दा सजिलो प्रयोगमा नेतृत्व गर्न जाँदैछ। हामी यस क्षेत्रमा पत्रकारहरूलाई शिक्षित गर्न सहयोग पुर्याइरहेका छौं।
यो नयाँ कानून पछि यस वर्ष पछि प्रभाव पर्न सक्छ। हाम्रो मित्रबाट उत्कृष्ट र धेरै स्पष्ट ब्लग पोस्ट जॉन कार्र यो ब्रिटेनमा बच्चाहरु को लागि एक महत्वपूर्ण र सकारात्मक विकास किन कथा बताउँछ।
एक दान को रूप मा हामी के सिकाउँछन् कोर मा मायालु सम्बन्ध छौँ, हामी यो केनेथ जॉन र डोरिस आईवी मेड, रिवार्ड फाउण्डेसनको सह-संस्थापक, डार्री मेडका आमाबाबुको गुनासोको मात्र सही विचार गर्दछौं। हामी एक्स्टोरियामा अष्ट्रेलियामा गएर उनीहरूको 74th विवाह वार्षिकोत्सव मनाउन धेरै खुशी भएको थियो। यस वर्ष फेब्रुअरीमा। तथापि तीन हप्ता पछि, केनले आफ्नो निद्रामा 19 वर्षको निविदा उमेरमा बितिसकेका थिए। डट, 94, केनका लागि बस्ने एक महिला, आफ्नो पछिल्लो बिहीबार, 93 हप्ता आफ्नो प्रिय पछि उनको चुपचाप सुत्न गए। उनले हामीलाई बताए कि उनी बिना उनको जीवन सहन सक्दैनन्।
यी दुवैलाई थाहा छ, एक्कासि मायालु हेरविचार र भक्ति देखेर एक सुअवसर पाएको छ तर केवल उनीहरूको प्यारी, सँधै सहायक, कम्पनीको मजा लिइरहेका छन्। हामी केनको हास्यपूर्ण अवलोकनहरू र वाक्यांशको कडा बारीको सम्झना गर्नेछौं, र डटको शान्त सुन्दरता र शैली।
जब मैले 2012 मा मेरो विवाह को दिन मा डट सोधें, एक लामो खुश विवाह को रहस्य के थियो, उनले भन्यो, "कभी बहस नहीं। त्यहाँ बारेमा बहस गर्न लायक छैन "। म बुद्धिमानी ती शब्दहरू माथितिर खुसी हुदै खुसी मायालु जो धेरै माया गर्थे र फर्किदै धेरै मायालु थिए। यसले त्यो भन्दा राम्रो प्राप्त गर्दैन।
प्रतिलिपि अधिकार © 2018 इनाम पुरस्कार, सबै अधिकार सुरक्षित।
तपाईले यो इमेल प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ किनभने तपाईले हाम्रो वेबसाइट www.rewardfoundation.org मा रोज्नुभयो।
हाम्रो मेलिंग ठेगाना हो:
प्लिङ पट,5गुलाब स्ट्रीट
एडिनबर्ग, EH2 2PR
हामीलाई आफ्नो ठेगाना पुस्तकमा थप्नुहोस्
परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ तपाई यी ईमेलहरू कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ?
तिमी सक्छौ आफ्नो प्राथमिकताहरू अद्यावधिक गर्नुहोस् or यस सूचीबाट सदस्यता समाप्त गर्नुहोस्.